ဝဏ္ဏမောင်လွင် မိသားစု – Community’s Naming and Shaming – Civilised Forums of Myanmar Community
Sep 08, 2021 8:52 pm
စစ်ကောင်စီနှင့် ပူးပေါင်းသည့် ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း ဝန်ကြီးတစ်ဖြစ်လဲ ဝဏ္ဏမောင်လွင်ဟာ ဒေါ်လင်းလင်းတင်နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး
ရန်ကုန်တိုင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန ဦးစီးမှူး ဒေါက်တာ တင်သစ္စာလွင်
အီတလီဆိုင်ရာ ဒုတိယ မြန်မာသံအမတ် လင်းမာလာလွင် "https://www.facebook.com/sweetylynn82" နဲ့
လင်းမင်းမောင်လွင်ဆိုပြီး သားသမီး ၃ ယောက် ထွန်းကားပါတယ်.
တင်သစ္စာလွင်ဟာ စင်္ကပူကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အင်ဂျင်နီယာ မျိုးမင်းမြတ်နဲ့ လက်ထပ်တယ်.
လင်းမင်းမောင်လွင်က ကေဇင်စုမွန်နဲ့ ဖူးစာဆုံတယ်.
လင်းမာလာလွင်က ဗိုလ်မှူး မျိုးချစ်ဆွေ "https://www.facebook.com/myochit.swe9" နဲ့ အကြောင်းပါတယ်.
လင်းမင်းမောင်လွင်နဲ့ သူ့ယောက်ဖ မျိုးမင်းမြတ်တို့က
Lynn Thiha Construction Co. Ltd.
Lynn Thiha Mining Co. Ltd.တို့ကို ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ပါတယ်
လင်းမင်းမောင်လွင်ဟာ Myanmar Accordance Group Co. Ltd. ရဲ့ ဒါရိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်.
သူနဲ့ သူ့ဇနီးတို့ပိုင်တဲ့ လေဆာမီဒီယာလုပ်ငန်းနဲ့ Lynn Thiha Electric and General Services Co. Ltd. ကနေ တောင်ကြီးမှာ off-grid အနေနဲ့ လျှပ်စစ်မီးရောင်းတယ်လို့သိရပါတယ်.
စစ်ကောင်စီနှင့် ပူးပေါင်းသည့် ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း ဝန်ကြီး